Home World News	Ragg Hubaysan Oo weeraray qunsuliyada china ee Magalada Karachi ee pakistan
labo ka mid ah sarakisha booliska iyo saddex ka mid ah dablay hubaysan ayaa la xaqiiyay inay ku dhinteen weerarka oo lagu eedeeyay kooxda gooni u goosadka ah ee lagu magacaabo cidama xoriyo doonka ah ee Baloch
Wararka maanta caalamka (somaliyatimes) Islamabad,Pakistan- askar hubaysan ayaa ku dilay labo askari o ka mid cidanka paskistan marki ay soo weerareen qunsiliyada wadanka china ee ku taala koonforta pakistan ee magalada karachi.
saraakiisha amaanka ayaa sheegay in duullaankan ka yimid marki ay sameeyan baadhis kadis ah kooxaha gooni u goosadka ah ee qowmiyada Baloch.
ciidama amniga ayaa dilay dhamman seddexdi nin dablayda ahaa ee weerarka soo qaaday muddo koobana amnigii ku soo celiyay dhismihii ,ka mid marki uu baadhitanku soo baxay subaxnimadii saaka ayay ku sheegan qoraal millatariga pakistan.
waxa kale oo warbixinti sii raacisay intaas inaysan jirin cid muwaadinin shiina ah ama pakistani ah oo ku dhimatay weerarkas ayay sii raaciyaan saraakisha amaanku.dhamaan saxibadadya shiinaha ah iyo saraakisha ka shaqaysa qunsilayada oo tiro ahaan ah 21 qof ah dhammantood way bad qabaan.
waxana lo wareejiyay meel amni ah ayuu ku yidhi wasiirka arrimaha dibada ee pakistan Mehmood Qureshi war saxaafadeed uu soo saaray.
sidoo kale raysal wasaaraha pakistan Imran Khan ayaa cambaareyey weerarka isaga oo ku sheegay inu yahay shirqool iyo mu’aamaroka dhan ah laguna xumaynayo wada shaqaynta istaratijiyadeed ee china iyo pakistan,
sido kale dhanka kale china ayaa isaguna cambaareyey weerarkas lagu qaaday qunsuliyadiisa wuxuuna sheegay in isaga iyo koxdisu ay hubiniyaan amaanka shacabkiisa china wuxu sido kale cambaareyey rabshad kasta oo weerer oo ka dhan ah wiikalada dublimaasiyadeed wuxuuna ka codsaday dawlada pakistan inay qaado taalo dhab ay ku hubanayso amaanka muwaadiniinta shiinaha iyo dastuurka dalka ayuu yidhi afhayaanka wasiirka arrimaha dibada Geng Shuang war saxafadeed u soo saaray .
millitariga ayaa xaqiijiyay in saddexdii nin ee dablayda ahaa weerarkana soo qaday la dilay oo ay boliska dib uso celiyeen
dhaqdhaaqa amaan ee goobta.
sida ay wararku sheegayaan labo ka mid ah ciidanka pakistan ayu ku dhintay weerarka ka dib marki ay dablayda weerarka so qaaday markkiba ay rasaas ku fureen albaabka hortiisa si ay u galaan qunsiliyada.
sida baadhitanadu sheegayan weerarka waxa lagu eedeeyay koobaha xoriyo doonka ah ee baloch oo ah koox gooni u goosad ah oo la dagaalanta dawlada pakistan si ay u helaan madax banaani dhulka ay degan yihin in ka badan 10naad sanadood.
sido kale afyahaan u hadlay kooxaha BLA ayaa sheegtay musuuliyada weerarkaas mar waraysi ku siiyey khadka telefanka warbaahinta.
ISIL ayaa sheegatay weerarro lagu qaaday ciidamada ammaanka...
Ciidanka Ethiopia ayaa 10 million dollar qabtay